Garashadii Wiilkii Yaraa! W/Q: Jamaal Cabdinaasir. – War La Helaa Talo La Helaa
Garashadii Wiilkii Yaraa! W/Q: Jamaal Cabdinaasir.
By cuu te	 On Sep 18, 2018
Nolosha dhinaceeda dhibta ahi waa xeer falan oo goor kasta bini’aadamku uu la tacaalo dhibteeda nololeed. Haddana waxaa inna horyaalla magaalo deegaan isku biirsatay nolol fiican. Aalaaba waxay nashqadeeyaan quudkooda iyo farxaddooda. Laakiin waxaa soo martay dhib ka soo duushay xagga sare oo urogtay dhaawac jidheed iyo maalba. Aan is qabadsiinno awoodda qaddarta iyo fursadaha horyaalo dadkii uu dhibku soo gaaray howlgalka ay faleen iyo dhibtii oo sii korodhaysa mooyaane aan is dhimeyn. Howl gudashadu waa qiyaas tiirar leh oo kolba awood fekireed iyo mid xeelad lahiba loo baahan yahay si tiirarka howshu ay isu heystaan. Mowjaddaan dhibta ahina waxay ina fareysaa inaan ku ekaano ogaalka daruufta si midkeen uusan uniyad jabin oo uusan ka fogaan qaddarta xeeladdeeda iyo fekirka xeeladdiisa. Taa ayaana qiimo u yeeleysa ogaalka daruufta! Dhib kastaa ee dhaca waxaa loo cararaa cidda ay quseyso ogaalna u leh cilmigeeda si uu badbaado caafimaad ukeeno tii Eebbena waa barako duco. Waxaa loo sheegay samafalayaal ku hubeysan daaweynta bini’aadamka oo astaan iyo cilmiba u leh.
Samafalayaasha way sii socdaan si ay u daabulaan codadka u yeeraya sidii shimbir isu mooday inay dhawaaq la’aan noolaan karto, ma lahayn sabab ay u weydiiyaan waxa ku kalifay xanuunkaan iyo fajaca ay meelaha la dul taagan yihiin.
Wiil ka mid ah baa xagga sare loogu mannaystay maan furan, wuxuu iska soo jaray “sabab miyaa xeelad daruufi ka wacan”? Waa asal su’aal aan loo riyaaqin laakiin caalamka su’aalaha aad bay ugu farxeen inay ku duulaan dulucda waxa la dul heehaabayo in marduuf caqli furnaan lala yimaado si furan. Samafaladii wax jawaab ah way waayeen xitaa maskaxdoodii qaanadaha way faag-faageen si uun jaawaab ay ugu soo fakato. Maxaa dhacay! Wiilkii indhaha-furnaa iyo koox uu la rafaadsanaa inta ay is wehshadeen bay koreen baskii bilaa sabab loo sawiray xaqiiq baahi.
Kolkaa ka dib wax ay socdeen waxa halaabay baskii, dadkuna uu ku jiro wiilka waxay la tacaalayaan xanuun iyo dhiig bax. Way sugeen oo bannaanka baska bay jiif-jiifteen si ay usii nastaan. Ka dib baa ragga gaariga wada waxay farsamo u waayeen inay sameeyaan baskii oo taayar ka mid ah ay la rafaadeen ku xir-xirridda boolasha, wax ay sameeyaan way garan waayeen iyagu caalamka xeeladda iyo fikirka uma furna kiliyaata waa jidhka waxa soo gala uun bay u furan yihiin, waana sabab ugaar oo ay doorteen. Waa halkeedee, wiilkii yaraa baa kormeer ku yimid isagoo la soo adeegsaday, wiilkii baa arkay samafalayaashii iyagoo la’ xeelad ay ku far-sameeyaan taayarka. Wiilkii wuxuu soo xasuustay qaddiyadihii ku hareereysnaa meesha uu ku noolaa oo ka dhawaa meelo far-samooyin ah isagoo gooro badan soo mar-marayey oo indhaha la dul marayey. Wuxuu ku soo baraarugay xeeladihii uu arki jiray wuuna u tilmaamayey laakiin iyagu ma’aheyn rag jdhkooda u dhameystiran fac-labood ama ( jidh dhisan) mashaqo kale!. Wax la sameeyo baa la garan waayay oo wareerkii baa batay, samafalayaashu iyagu waa asxaab u qalbi furan nadiifinta jirka iyo waxyaabaha ku lamaanan, waxay moogsoonaayeen nolosha iyo dhinacyadeeda.
Mashaqadii waxay ku sii kordhisay dadka roob oo ka suu duulay xagga sare iyo qabow wada socda, dadkuna way jah-wareereen iyagoo wax ay sameeyaan garan la’. Meeshu waa meel cidla ah oo guryo kama dhawa oo ay ku gabaadsadaan si xanuunku uu ugu sii darin. Wax la sameeyo la garan waa. Samafalayaashii meel ay wacaan way garan waayeen oo moobiladii (network)a baa is hayn waayay oo qadka ma’ahan meel laga heli karo waayo meeshu waa meel fog oo cidla ah.
Mashaqooyinka nuucan furdaamintooda looma tiirin karo isku xirnaan la’aan oo dadkaas lagu badbaadin karo laakiin xeelad garasho baa la waayay. Waa doorashoiyinka isa soo saara.
Maxaa xigay?! Wakhtiga wuu is hayaa oo roobkii baa ciyaaraya si uu naxariis xeelad u keeno sida xaaladdaas loo arkayay. Wiilkii yaraa isaguna wuu is galay oo dhaxantii buu kari la’yahay laakiin waa wiil u socotama socodsiinta waxa hor yaalla si uu ugu gambado qaladaadka lasoo darsa nafta. Wuxuu biday meel gabaad laga dhigto inay tahay in gaariga dib loogu laabto, baabuurkuna ma aheyn mid taagan oo lug ka mid ah way fadhidaa, marka gaariga haddii lasoo galo dhinac buu u liicayaa oo waa suuragal in uu gaddoom u tillaabsado, lugtana waxay sameyday dillaac u baahan badal, mana sitaan ( spare parts) oo lugtaas lagu badalo.
Wax badbaadiyo kama dhawa, samafalayaashii way cabaadeen oo qabowgii baa kolbo uu keentay waa asxaab caafimaadkooda la socon jeer kasta oo iyagaa dadka talo iyo dawo siin jiray kana digi jiray meelaha qatarta ah laakiin iyaga bay ku soo wareegatay kama dhigno in iyagu ay kama maarmaan laakiin waa cilmi laga soo xawilay sanduuqa sare. Marka waa in aan dacwad lala imaan oo garashada la soo xareeyaa si badbaadada iyo kor u taagidda gacmaha la sameeyaa.
Wiilkii yaraa baa dadka xanuunsan ugu fikiray xeelad, wuxuu u tagay dadkii oo ku yiri ” qasab ma’ahan in la fadhiisto, qasabna ma’aha in la is taago, waxaase qasab ah u fikirka waxa la sameeynayo in ay soo kordhin karaan nabad iyo badbaado”. Arrintaan baa umuur iyo dhiirrani ku yeelatay, laakiin iyagu waa dhaawac halis ah wakhtiguna wuxuu isu rogay gabal dhac, si kasta waxay ku rajo weynaayeen inay ku hoyadaan meel cayiman aan ( Target) noqon karin kaliyaata koobsan karo meel caafimaad laga helayo.
Wiilkii wuxuu soo rogay in badbaadadu ku jirto in godad la qodo oo la galo si dhaxantaan iyo qabowga looga gambado, dadkii taladan way ruugi waayeen oo way ka naxeen, sababtuna ma’aheen in ay diidayaan laakiin waa dhaawac halis ah oo ruux qaadi karta ma jirto waxay cudur daar soo gudbiyeen dadku in aan laga quusan (baska). Wiilkii yaraa baa u laabtay samafalayaashii oo is gal-galay oo midba midka kale ku gambanayo si dabaysha iyo dhagaxaanta ay tuureyso ugu gambadaan. Wiilkii wuu u sheegay arriinkii iyaguna way ka aqbali waayeen oo la yaabeen ka dib buu soo kaxeeyay una keenay dadkii rafaadsanaa si uu dhamaantood ugu qanciyo arrinkaan uu sheegay.
Kadib wax ay isla rafaadaan oo wuxuu ku qanciyay “in wax kastaahi ay kala horreeyaan sideedaba nolosha waa ka hore kana dambe” marka muhiimaddu aynu eegno waxa ina hor yaalla waa dhaxanta iyo qabowga sida aynu ugu gamban lahayn. Way ka yeeleen oo aragtidii way qaateen. Maxaa xiga! Habeen baa la gaaray roobki iyo dhaxantiina gurbaankooda bay ciyaarayaan dadkiina cabaadkooda bay la dhacsan yihiin, wiilkii wuxuu ku fikiray hannaanka loo heli karo (Agab) si loogu qodo godka. Waxaa soo booday mid samafalayaashii ka mid ahaa oo ahaa farsamo yahannada kuwa sameeyo barkadaha iwm, wuxuu soo xasuusta barakaddii mar uu wal-walaaqay si loogu faa’ideysto mashaqada taagan,nasiib wanaagse wuxuuba watay dhowr badiil, oo Wuxuu yiri aynu gashano (kaloofisyada) waa agabka gacmaha la gashto markii howl ama (operation) lagu guda jiro, waxa isticmaala (dhaqaatiirta). Wuxuuna ku daray in roobka uu ina saacidayo oo dhulku waa biyo miiran, wax waa la qodi karaa wuxuu kaloo ku daray in birarka aan baska ku sameyn kari weynay ayna qabsanno oo godadka geesahooda lagu habeeyo. Way iskala qeybiyeen oo ruuxba dhinac buu ka faagay oo (birarku) way tiro yaryihiin, asxaab baa qoryo meelaha yaallay qaateen laakiin asxaabtaas way awoodi kari waayeen, qoryahu way qoyanyihiin oo awood ma hayaan.
Halkaa saameyn baa kasoo gaaray, waxay ujan-jeereen xeelad kale uu wiilka soo saaray in taayarka lagu dul bood-bood siiyo dhulka si uu udumo. Kadib in yar buu suurageliyay taayarkii oo qeyb ka noqday guudha billowgeedii. Habeenkiina wuu is gurayaa wacdigii dayaxa lama hayo waxaa qosol ku jira roob aad moodo in loo beegay soo laabasho la’aan.
Waxaa soo hayaamay dumar ka mid ah, dumarkii xanuunsanaa oo (maama) ahayd waxay ku baraarujisay in aysan iska dabaalin xanuunka ay la jiifaan dadkaas, oo looga baahan yahay in furdaamis badbaado lala yimaado. Way baraarugeen oo isweydiimo calaacal baa yimid, ruux kastaana udamqaday xanuunka iyo cabaadka ay hayaan dadka. Isbadal dareen baa yimid oo loo baahan yahay wakhtiyada adag in lala yimaado si xurguftanka uu usoo socdaalo.
Baraarug ka weyn baa wiilkii soo rogay oo yiri ” wax kastaahi waxay leeyihiin qiyam bini’aadannimo, kaliya aynu eegno xilliga la inoo baahan yahay yeynaan eegin xilliga baahideenu ay imaan doonto” waxay aragtidani xawaas (dareemo) badani ay kicisay duulkii samafalayaashii oo ubarakacay qalbi jab aan muuqan. Waxaa la helay xeelad kale oo loo baahnaa wakhtigeeda in dadka dhamaan ay wada shaqeeyaan halkii ay markii hore ka shaqeynayeen wiilkii yaraa iyo samafalayaasha oo keliyaata; oo horaa loo yiri ‘far keliya fool ma dhaqdo’ Waxaana howshii la hirgeliyay ayadoo jamac la wada yahay oo keliya dadka dhaawaca daran qabay ay ka maqanyihiin hoowshu.
Wiilkii isagoo hoowsha dhinac kawada hadanee ayuu,goor badan fikirayay buu ulaabtay dadkii xanuunsanaa oo maamo ka mid ah oo garasho ubareeratay baa waxay ku tiri wiilkii ” fac kasta wuxuu la yimid isbadal nolol laakiin fac kastaahi loo ma sababeyn in uu isbadal sameeyo kaliya waxay cabbireen in nolosha u baahan tahay isbaddal muhiim ah” adiguna uduul fikirka si uu inooga samatabixiyo udgoonka oo rabbi inagu maneystay, Waa falsafadda nolosha bay ku tiri.
Xeerarkii loogu soo wacdiyay isagoo ka shidaal qaadanayo buu howshii sii laba jibaaray wuxuuna keenay xeelad kale oo ah in marka koowaad hoowsha god qodida la fududeeyo,ayadoona la isu dhiirigelinayo maahmaahdii aheed ‘gacmo wadajir bay wax ku gooyaan’ buu wiilkii soo jeediyay talo ahaan in farxada iyo cawaaqibta ashaqaraarsan ee wada heesata dhamaantood la mideeyo oo uu ula jeedo in hees howleed dareen kicin kara dhamaantood ay ku hadalqabsadaan,si howsha iyo mashaqada uga fududaan:madadaalana ay ugu noqoto. Ugu dambeyntiina waxa ay ku guuleysteen in ay godadkii weynaa ay diyaariyaan. Waxaana godkii galay dadkii oo wada faraxsan. Alla nolosha macaanaa marxaladan baa dadkii sawirteen. Kadib wiilkii wuxuu sameeyay in uu ka aruuriyo calalka ay sitaan dadka si godka looga daboolo oo biyaha iyo dhaxanta lala ficiltamo. Waa halkeedii, wax wakhtiyo kooban lagu jiro ba waxaa isa soo rogay qoraxdii, waxaa soo toosay dadkii oo isdul jiifay kadib roobkiina dib buu ulaabtay isagoo faraxsan. Bannaanka baa loo soo baxay, jawigu waa qurux iyo cadceed ciil hayo oo shalayto wakhtigeeda ka qashqashaaday roob. Waxayna farriin usiddaa dadka, waxayna leedahay barako baa idin sidaa soo dhawaada caalamka cusub ee ay ka taliyaan cadceedda. Waxaa wiilkii yaraa isugu yeeray dadkii oo idil, way isugu yimaadeen qof kastaahi baahi, iyo xanuun buu la hadli la’yahay cabaadkii waxaa daboolay xanuun socota ah oo xal loo la’yahay. Wuxuu yiri, waxaynnu ubaahannahay inay isla furdaamino rafaadkan hadda wakhtigan la joogo inta qoraxdana is ceyrsan oo aysan kululaan aan faa’ideysano, xeeladna aan la imaano si baskeennii inoogu hagaago. Meeshu wali waa cidlo oo ruux ma soo marayo, wiilkii wuxuu talo ku darsaday samafalayaashii oo ku yiri ” wakhtiyadu waa isbadalaan, xalaytu waad ogeedeen dhibka aan marnay marka waa in aan baskaan aan farsameynaa oo isku biirinaa kartideena, farsamadeena, fikirkeenna”. Way ka ogolaadeen waxay ogaadeen in wiilku wacan yahay, kol kaa kadib waxaa ruux kasta ku soo baraarugay fikir si uu usamata bixiyo dadka meesha ku dhibaateysan.
Waxaa garasho loo cuskaday xeelad, xeeladdaas badi malala kacaa kufin oo waa lagu dhiiraday. Xeeladdaas waxaa soo jeediyay wiilkii yaraa wuxuu yiri taayarka aynu ku xirno marooyinka ama (calalka) oo lugta gadaasheed aan ku xirno, halkii hore oo lagu xiri jiray boolasha dulleelada. Marka aynu ku sameyno calalkaa, way ku raaceen oo samafalayaashii way ku dadaaleen, rafaad bay kala kulmeen. Laakiin waxaa bogaadin iyo dhiiragelin ku waday dadkaa dhibaateysnaa waa la yaab!. Kolkaas kadib baskii lugtiisa way usuura gashay in uu istaago kadib farxad weyn soona koobeysa caafimaadka dadka baa soo nuurtay. Baskii baa darawalkii iyo wiilkii fuuleyn oo kiciyay kadib buu illaa xoogaa dhaqaaqay, wiilkii wuxuu odoroosay culeyska dadka in basku iyo lugtiisa ay ka soo dacwoon karin waayo marxaladaha adag dacwadu ma fiddo oo xalalka baa oggolaansho sameeya. Wiilkii wuxuu uyeeray dadkii oo ku yiri samafalayaashii ruux ruux haloo soo wado, kadib baskii baa la soo saaray. Baskiina wuu dhaqaaqay oo aayar aayar buu usocday, tartiibtiisa buu ku xifaaltamay wiilkiina wuuxuu isha ku hayay taayarka ilaa laga gaaro halka badbaadadu ku ciyaareysay si fursad aynu ugula ciyaarno ugu helno.
Meeshii la rabay way yimaadeen wiilkii yaraa aad buu u farxay si fog buu u farxay, halkii baa dadka lagu daabulay oo isbitaalkiina la geeyay. Mid midna waa loo daaweynayey wiilkiina wuu kormeerayey isagoo dadku ay uduceynayaan sida garashada leh ugu saamaxay in uu uxamaalo. Halkaa baana isagana lagu siiyeey daawooyin kooban oo ka hortegi karaa dhibaatooyinka ay ku keeni lahaayeen; wareerkii,dhafarkii iyo mashaqadii badneed oo caafimaad mid maan ah iyo mid jidhba u helay.
F.G: dulucda qisadan waxay dul mareysaa in nolosha looga baahan yahay garasho aad naftaada ugu xamaaleysid iyo garasho dadnimo loogu sara kiciyay si nolosha la noolyahay loogu faa’ideysto xeeladaha innagu hareereysan.
Badi nolosha waxay ubaahan tahay qorsho fog oo aadan goor kasta nolosha aadan ka filan karin dagganaan, goor kasta nolosha wacdigeeda wuu sii kordhayaa, noolahana calaacalkiisuna wuu sii kordhayaa si nolosha iyo agabka xaqiiqadeeda loo ogaado waa in nolosha iyo qiyamkeeda la ogaadaa.
Sh/dhexe: Beeraley Ka Cabaneysa Wax Soo-saar La’aan !